Daraasado Dheeraad ah oo ku saabsan Dhibaatooyinka Porn - Foundation Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Blog Daraasado Dheeraad ah oo ku saabsan Dhaawacyada Porn
Daabacaadda qeexitaanka Dhibaatada Habdhaqanka Galmada ee qasabka ah bishii Juun 2018 ee WHO waxay ku saleysneyd caddeyn macquul ah. Si kastaba ha noqotee, dadka qaar wali way diidaan in isticmaalka filimada sawirku uu sababi karo waxyeelo maskaxeed ama jireed. Boggan waxaan ku eegaynaa daraasadaha sababaha 6 ee illaa iyo hadda la daabacay taas oo muujineysa sababaha maadaama kaqeybgalayaashu ay tirtireen isticmaalka sigaarka oo ay bogsadeen dhibaatooyinka galmada ee joogtada ah. Dhammaantood waxay ku xiraan isticmaalka sigaarka ama u-takooridda galmada ee dhibaatooyinka galmada iyo kacsiga hoose.
1) Miyuu Pornography Internet ka keenayaa Dhibaatooyinka Galmada? Dib-u-eegis Warbixin Caafimaad (2016)
Dib-u-eegis balaaran oo ku saabsan suugaanta ee la xiriira dhibaatooyinka galmada ee sababa. Ku biirida 7 dhakhaatiirta Badda Mareykanka, dib-u-eegisku wuxuu bixiyaa xogta ugu dambeysa oo muujinaysa korodh weyn oo ku wajahan dhibaatooyinka galmada dhallinyarada. Waxay sidoo kale dib u eegaysaa daraasaadka qalliinka ee la xidhiidha daroogada sigaar-cabista iyo xayiraadda galmada iyada oo loo marayo porno internet. Dhakhaatiirtu waxay bixiyaan warbixinno caafimaad oo 3 ah oo ku saabsan ragga oo soo jiitay dhibaatooyinka galmada ee kufsiga. Laba ka mid ah saddexda nin ayaa bogsiiyey asxaabtoodii jacaylka iyaga oo ka takhalusay isticmaalka sigaarka. Qofka saddexaad wuxuu la kulmay waxoogaa horumarin ah maadaama uu awoodi waayay in uu ka fogaado isticmaalka sigaarka. Sooc:
Waxyaabaha dhaqameed ee mar horeba sharaxay dhibaatooyinka galmada ragga waxay u muuqdaan kuwo aan ku filneyn inay koontaroolaan korodhka foosha xun ee cillad la'aanta, daahfududinta, hoos u dhicinta jinsiga, iyo dhimista libido inta lagu gudo galmo jinsiga ah ee ragga ee 40. Dib-u-eegiddan (1) waxay tixgelisaa xogta laga helayo domiyo badan, tusaale ahaan, kiliinikada, bayoolajiga (takoorka / uruurinta), maskaxiyan (xaalada jinsiga), cilmiga bulshada; iyo (2) wuxuu soo bandhigayaa warbixinno isbitaal oo taxane ah, oo dhammaantood ujeedadoodu tahay soo jeedinta jihada suurtogalka ah ee cilmi baarista mustaqbalka ee dhacdadan. Isbedelka habka dhiirigelinta maskaxda ayaa lagu sharxayaa sida suurtogalka suurtogalka suurtogalka ah ee hoos yimaada asluubta maskaxda ku xiran ee galmada la xidhiidha.
Dib-u-eegiddani waxay sidoo kale tixgelinaysaa caddaynta sawirrada muuqaalka sawir-gacmeedyada gaarka ah (muuqaalka cusub ee xadidan, suurta galnimada in si fudud loo kordhiyo walxaha dheeraadka ah, qaabka fiidiyowga, iwm.) Waxay noqon kartaa mid awood u leh in lagu daboolo masruufka galmada ee dhinacyada isticmaalka pornography-ka ee aan si fudud ugu gudubin dhabta - lamaanayaasha nolosha, sida jinsiga ah ee la-hawlgalayaasha doonaya inaysan diiwaan-galin sida ka-filashada kulamada iyo hoos-u-dhac ku yimaadda. Warbixinaha caafimaadku waxay soo jeedinayaan in joojinta isticmaalka "pornography Internet" ay mararka qaarkood ku filan tahay in lagu soo celiyo saameyn xun, oo hoosta ka xariiqaya baahida loo qabo baaritaan balaadhan iyadoo la adeegsanayo habab loo adeegsanayo hababka kala duwan ee laga isticmaalo isticmaalka daroogada internetka.
Abaalmarinta Abaalmarinta qoray sheeko ku saabsan daraasaddan markii ugu horreysay ee uu soo baxo.
2) Caadooyinka naasaha iyo habdhaqanka galmada (2016)
Daraasadani waxaa sameeya dhakhtar maskaxeed oo Faransiis ah oo hadda ah madaxweynaha hadda Isbahaysiga Yurub. Inkasta oo qeexitaanku uu dib udhigay oo uu udhigay isticmaalka filimada internetka ee isticmaalka iyo niyadjabinta, waxaa cad in uu badanaa tixraacayo porn-sababto jilicsanaan galmo (xanuunka erectile iyo anorgasmia). Qoraalku wuxuu kudhacayaa khibradiisa bukaan-socodka iyada oo ay la socdaan ragga 35 kuwaas oo hormariyay cillad aan caadi ahayn iyo / ama anorgasmia, iyo hababkiisa daweyneed si ay u caawiyaan. Qoraaga ayaa sheegaya in bukaankooda badankood la isticmaalo porno, iyada oo ay ku jiraan qaar badan oo la qaddariyey inay leexdaan. Qodobada la taaban karo ee loo yaqaan porno internetka sababta ugu weyn ee dhibaatooyinka (maskaxda ku hay in masturbaygu uusan u keenin ED oo joogto ah, weligeedna laguma siinayo sababta ED). 19 ee ragga 35 waxay arkeen hagaajin wax ku ool ah oo ku saabsan shaqeynta galmada. Ragga kale ayaa ka baxa daaweynta ama weli isku dayaya inay ka soo kabtaan. Astaamaha:
Intro: Nasiib darro iyo xitaa waxtar u leh qaabkiisa caadiga ah ee loo adeegsado, mXayiraad ku jirta foomka xad-dhaafka ah iyo tan hore, guud ahaan xiriir la leh macaamil-xumada, waxaa badanaa la iska indha-tiraa qiimeynta bukaan-eegtada ee ka-hortagga jinsiga oo keeni karta.
Natiijooyinka: Natiijooyinka bilawga ah ee bukaankan, ka dib daaweyn si "aan loo baran" caadooyinkooda siigaysiga iyo balwaddooda inta badan la xiriirta ee qaawan, waa dhiirigelin iyo rajo. Hoos u dhigista astaamaha ayaa laga helay bukaanada 19 ee 35 ah. Dhibaatooyinka dib-u-dhaca iyo bukaannadani waxay awoodeen inay ku raaxaystaan ​​dhaqdhaqaaqa galmada ku qanacsan.
Gabagabo: Niyad jabka, oo inta badan la socota ku tiirsanaanta sawir-qaadashada sawir-qaadidda, ayaa loo arkay inay ka ciyaari karto doorka asaasiga ah ee noocyada kala duwan ee cillad la'aanta ama kacsanaanta. Waxaa muhiim ah in si nidaamsan loo ogaado joogitaanka caadoahaan halkii ay ka qabsan lahaayeen cilad-saarista by tirtirista, si loogu daro farsamo-jajabinta farsamooyinka farsamo ee maamulka maareyntarradaas.
3) Dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo ku saabsan sida loo yaqaan 'etiological factor' ee cilad-sheegista iyo daaweynta xanuunada galmada ee ragga (2014)
Mid ka mid ah daraasadaha kiisaska 4 ee wargeyskan ayaa ku soo warramey nin leh dhibaatooyin jinsi-jinsi-jebis ah (libido, fetishes, anorgasmia). Farogelinta galmada waxay ku baaqday xornimadii 6 todobaadkii oo laga xishoodo ladagaalanka iyo nacaybka. Kadib 8 bilood ninku wuxuu sheegay in ay kordheen rabitaanka galmada, jinsiga guusha iyo orgaanmiga, iyo ku raaxaysiga "ficilada galmada wanaagsan. Tani waa tii ugu horeysay ee dib-u-eegis lagu sameeyo dib-u-soo-kabashada ee ka soo kabashada laf-jebinta jilicsanaanta jinsiga. Qodobbada ka soo baxa waraaqda:
"Markii la waydiiyay waxa ku saabsan ficilada ficilka, wuxuu soo sheegay in horay uu si adag u dhaqdhaqaaqay islamarkaana uu si dhaqso ah u daawanayay isagoo daawanaya filimada sawirka ilaa iyo markii uu qaangaarka ahaa. Filimada asal ahaan waxa ay ka koobnayd badmaaxiinta, addoonsiga, xukunka, xukunka, masuq-maasuqa, laakiin ugu dambeyntii waxa uu uqalmacay qalabkan oo wuxuu u baahnaa sawirro fara badan, oo ay ku jiraan jinsi-jinsi, jinsi, iyo jinsi rabshado ah. Waxa uu ka iibsaday filimaan filimo ah oo sharci darro ah oo ku saabsan falalka galmada ee kufsiga iyo kufsi iyo sawirrada muuqaalkiisa ku muujiyay ra'yigiisa inuu ku hawlanaa galmo haweenka. Wuxuu si tartiib tartiib ah uga lumay rabitaankiisa iyo awooda uu u leeyahay inuu ku fekero oo uu hoos u dhigo soo noqnoqoshadiisa. "
Iyadoo ay la socdaan kalfadhi todobaadle ah oo leh daaweeye galmo, bukaanku waxaa lagu faray in uu ka fogaado wax kasta oo la xiriira galmada, oo ay ku jiraan fiidiyowyada, wargeysyada, buugaagta, iyo filimada internetka.
Ka dib markii bilihii 8, bukaanku wuxuu soo tebiyay in uu dareemay orgasm iyo guuldaro. Wuxuu dib u cusbooneysiiyay xidhiidhkiisa gabadhiisa, waxayna si tartiib tartiib ah ugu guuleysteen inay ku raaxeystaan ​​dhaqamada wanaagsan.
4) Sidee ayey u adagtahay in la daaweeyo ejaculated dib-u-dhac ah oo ku dhex jira habdhaqan-maskaxeed muddo-gaaban ah? Isbarbardhigga xaaladaha barashada (2017)
Warbixin ku saabsan laba xaaladood oo "xaalado isku dhafan" oo muujinaya sababaha iyo daaweynta ejaculation delayed (anorgasmia). "Bukaanka B" waxay mataleen dhowr dhallinyaro ah oo ay daweeyeen dabiibaha. Si xiiso leh, wargeysku wuxuu sheegayaa in bukaanku B "isticmaalka porno uu sii kordhiyay qalab adag", "sida badanaa waa kiiska". Wargeysku wuxuu sheegayaa in ejaculada dib loo dhigo sigaarka aysan aheyn wax caadi ah, iyo kor u kaca. Qoraaga ayaa ku baaqaya baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan saameynta porno ee shaqeynta galmada. Dareeraha dib-u-dhaca ee bukaan-socodka B ayaa la bogsiiyey wiiggii 10 ee aan lahayn porno. Astaamaha:
Kiisaska waa kiisas isku dhafan oo laga soo qaatay shaqadayda gudaha Adeegga Caafimaadka Qaranka ee Isbitaalka Jaamacadda Croydon, London. Kiiskiisa dambe (bukaanka B), waxaa muhiim ah in la ogaado in soojeedintu ay muujinayso tiro ka mid ah dhalinyarada da 'yarta ah ee ay soo gudbiyeen dhakhtarradooda oo ay la socdaan baadhitaan la mid ah. Bukaanka B waa 19-sano jir ah oo soo bandhigay sababtoo ah waxa uu awoodi waayay in uu nuugo iyada oo loo marayo dhexgalka. Markii uu ahaa 13, wuxuu si joogta ah u gali lahaa boggaga fara-xumeynta ama isaga oo isticmaalaya raadinta internetka ama xidhiidhada ay saaxiibbadiis u direen isaga. Wuxuu bilaabay inuu nasto habeen kasta isagoo raadinaya telefoonkiisa sawirka ... Haddii uusan wax cabsi galin uuna awoodin inuu seexdo. Nasiib darrada ayaa la isticmaalay, sida badanaa waa kiisku (eeg Hudson-Allez, 2010), qalab adag (wax sharci darro ah) ...
Bukaan-socodka B wuxuu soo gaadhay muuqaal jinsi ah isaga oo adeegsanaya sawirro ka soo jeeda da'da 12 iyo filimka uu isticmaalayo wuxuu sii kordhiyay addoonsiga iyo awooda da'da 15.
Waxaan ku heshiinay in uusan mar dambe u isticmaali doonin fara-xumeyn si loo xakameeyo. Taas macnaheedu waxa weeye in uu telefoonkiisa ka soo galo qol kale oo habeenkii ah. Waxaan ku heshiinay inuu nasiib u yeesho qaab kale.
Bukaanka B wuxuu awooday inuu ku guuleysto orgaanmaadka isagoo dhex maraya fadhiga shanaad; kulamada waxaa la bixiyaa labadii toddobaad ee Isbitaalka Jaamacadda ee Croydon sidaa darteed shan kalfadhi ayaa u dhigma qiyaastii 10 todobaad ka dib la tashiga. Waxa uu ahaa mid faraxsan oo si weyn u niyad jabay. Seddax-bilood oo la socosho ah Bukaanka Bukaan-socodka, ayaa wali si fiican u socotay.
Bukaanka B ma aha keli keli ah oo ka mid ah Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS) iyo dhab ahaantii raga dhalinyarada ah ee guud ahaan hela daaweynta nafsaaniga ah, iyada oo aan la-hawlgalayaasheeda, waxay isku hadlaan isbedelka.
Sidaa daraadeed, maqaalkani wuxuu taageersan yahay cilmi-baaris hore oo xiriir la leh qaabka masturbalka ee jilicsanaanta jinsiga iyo pornography si ay uhesho qaabka masturbalka. Maqaalkani wuxuu soo gabagabeynayaa in guusha ay ku salaysantahay daaweynta nafsaaniga ah ee la shaqeynaya DE in ay dhif tahay in lagu qoro suugaanta tacliinta, taas oo u ogolaatay aragtida DE in ay tahay arrin adag oo lagu daweynayo inta badan aan loo baahnayn. Maqaalkani waxa uu ku baaqayaa in baaritaan lagu sameeyo isticmaalka sarkaalka iyo saameynta ay ku leedahay masturbalka iyo burinimada xubnaha taranka.
5) Daaweynta Cudurrada Maskaxda ee Xaaladda ah: Daraasad Xaaladeed (2014)
Faahfaahinta waxa ay muujineysaa kiis ah feejignaan fara badan. Khibradda jinsiga ee keli ah ee ka hor guurka waa fannaankii ugu xumaa ee uu ku galo filimmada - halkaas oo uu awood u lahaa in uu baxsado. Waxa kale oo uu soo wariyay galmo galmo aan ka yareynin marka loo eego naas-nuujinta. Xogta muhiimka ah ee macluumaadka waa in "dib u tababarid" iyo daaweynta nafsaaniga ah ay ku guuldareysteen in ay bogsiiyaan niyadjabkiisa. Markii waxqabadyadani ay ku fashilmeen, daaweeyayaashu waxay soo jeediyeen mamnuucid dhamaystiran oo ku saabsan masturbay si laydhiyo. Ugu dambeyntii mamnuuciddaan waxay dhalisay galmo guuleysi ah iyo jahawareer leh lamaane markii ugu horeysay noloshiisa. Qodobbo kooban:
A waa nin 33 ah oo guursaday ragga oo leh hanuuninta heterosexual, xirfadle ka soo jeeda asal dhaqameed dhaqan dhexe. Ma uusan laheyn xiriiro galmo oo horay loo sameeyey. Waxa uu daawaday filimada sawirka iyo marar badan oo la naqdiyay. Aqoontiisa ku saabsan jinsiga iyo jinsiga ayaa ku filan. Kadib guurkiisa, Mr. A wuxuu ku tilmaamay libido sidii hore ahayd mid caadi ah, laakiin dambe ayaa hoos u dhigtay dhibaatooyinka ejaculatory-ka. Inkastoo ay socdeen dhaqdhaqaaqyo loogu talagalay daqiiqado 30-45, waligiis ma awoodin in ay jahwareeraan ama u geeriyoodaan orgaanku inta lagu guda jiro galmoodka jilicsan ee xaaskiisa.
Maxaa shaqeyn waayey
Daawooyinka Mr A ayaa la mideeyey; clomipramine iyo bupropion ayaa la joojiyay, iyo sertraline waxaa lagu hayaa qadar daawada 150 mg maalintii. Kalfadhiyada daaweynta ee labada lamaane ayaa la qabtay todobaadkii bilo bilo bilo ah, ka dib markii la isku darey labadii asbuuc iyo bilo kadib. Talooyin khaas ah oo ay ka mid yihiin diiradda saarista dareenkooda galmada iyo xoogsaaridda khibradda jinsiga halkii laga saari lahaa dheecaan loo isticmaalay si loo yareeyo hoos u dhigidda walaaca iyo bandhigida. Maadaama dhibaatooyinku ay sii socdeen inkastoo ay jiraan waxqabadyadaas, daaweyn xooggan oo xoog leh ayaa loo tixgeliyey.
Ugu dambeyntii waxay mamnuuceen mamnuucid dhamaystiran oo ku saabsan masturbay (taas oo macnaheedu yahay inuu sii waday inuu xajisto jilicinta inta lagu jiro ficilada kor ku xusan):
Xayiraadda nooc kasta oo jinsi ah ayaa la soo jeediyey. Leylinta xoogga ah ee dareen-celinta (horraantii aan xubin ka ahayn iyo xubnaha taranka) ayaa la bilaabay. Mr. A ayaa ku tilmaamay in aan la awoodi karin in uu la kulmo heer aad u sareeya inta lagu guda jiro mudada galmada marka la barbardhigo wixii uu soo maray intii lagu guda jiray masturbay. Markii la mamnuucay mamnuucista masturbalka, wuxuu sheegay in rabitaanka sii kordhaya ee jimicsiga uu la leeyahay lamaanihiisa.
Ka dib markii waqti aan la cayimin ah, mamnuucista niyad-jebinta inay hogaamiso hogaaminta guulaha:
Dhanka kale, Mr A iyo xaaskiisa ayaa go'aansaday in ay sii wadaan farsamooyinka taranka ee taranka (ART) waxaana la mariyey laba wareeg oo loo yaqaan 'intrauterine'. Intii lagu guda jiray fadhiga tababarka, Mr. Ejaculed markii ugu horeysay, ka dib kaas oo uu awooday in uu si xor ah u dejiyo inta badan inta badan isdhexgalka lamaane ee lamaane.
6) Pornography oo ku dhejisey erectile xakamaynta Erayada dhallinyarada (2019)
aan la taaban karin, Warqadani waxay sahaminaysaa astaamaha sawir-gacmeedyada ayaa sababay cillad aan fiicnayn (PIED), oo loola jeedo dhibaatooyinka awoodda galmada ee ragga sababtoo ah isticmaalka sigaarka ee internetka. Xogta xasaasiga ah ee ragga qaba xanuunkan ayaa la ururiyey. Isku-darka habka taariikh nololeed ee hab nololeed (oo leh wareysiyo internet ah oo ashtako ah oo ashtako ah) iyo xafiisyada internetka ee shakhsi ahaaneed ayaa la shaqeeyay. Xogta ayaa lagu falanqeeyay iyadoo la adeegsanayo falanqaynta tarjubaanka (oo la xidhiidha aragtida warbaahinta ee McLuhan), oo ku salaysan isdhexgalka falanqaynta. Baaritaanka xoogga leh wuxuu tilmaamayaa in uu jiro xiriirka u dhexeeya isticmaalka pornography iyo cilladda erectile oo soo jeedinaysa keenista.
Natiijooyinka waxay ku saleysan yihiin wareysiyo 11 oo ay la socdaan laba xusuus-qoraxyo iyo saddex qoraallo qoraalo. Ragga waxay u dhexeeyaan da'da 16 iyo 52; waxay soo tebiyaan in horudhac horudhac ah oo lagu sameeyo pornography (badanaa inta lagu jiro qaan-gaarnimada) waxaa la socda isticmaalka maalinlaha illaa heerka dhibcaha ah (oo ku lug leh, tusaale ahaan, waxyaallaha rabshadaha) loo baahan yahay si loo ilaaliyo maskaxda. Marxaladda muhiimka ah ayaa la gaaraa marka aroosku jinsi yahay oo la xidhiidha ficil ahaansho xun oo degdeg ah, oo muujinaya xajmiga jidhka ee jilicsan iyo ka foojignaanta. Tani waxay keenaysaa in aysan awood u lahayn in ay sii wadato kor u qaadida lamaanaha nolosha dhabta ah, taas oo tilmaamaysa in ragga ay bilaabeen "geedi-socodka dib-u-soo-deyn", iyaga oo joojinaya sawir-maskaxda. Tani waxay ka caawisay qaar ka mid ah ragga in ay dib u helaan awooda ay ku gaari karaan oo ay u sii joogi lahaayeen.
Hordhac qaybta natiijooyinka
Markaad ka shaqeyneysey xogta, waxaan dareemay qaababyo iyo mawduucyo soo noqnoqda, ka dib sheeko taariikheed oo ku saabsan dhammaan waraysiyada. Kuwani waa: Hordhac. Mid ayaa marka hore loo soo bandhigay filimada, inta badan ka hor qaangaadhka. Dhisida caado. Mid ka mid ah wuxuu bilaabmaa inuu si joogto ah u isticmaalo sawirada. Kicinta. Mid ka mid ah qaabab badan oo "filim" ah, oo ah mid aad u macquul ah, si uu u gaaro saameyn isku mid ah oo horey loo soo mariyey qaabab badan oo "filim" ah. Hirgelinta. Mid ka mid ah ogeysiisyada dhibaatooyinka awoodda galmada ayaa la rumaysan yahay in ay sababtay isticmaalka filimada. "Dib-u-soo-kabasho". Qofku wuxuu isku dayaa in uu xakameeyo isticmaalka pornography ama uu si buuxda u tirtiro si uu dib ugu helo awoodiisa galmada. Xogta laga helayo waraysiyada waxaa lagu soo bandhigayaa iyada oo ku saleysan tusmada kor ku xusan.
Marka lagu daro daraasadaha keena kor ku xusan, Boggan waxaa ku jira qoraallo iyo fiidiyowyo iyadoo la adeegsanayo khubaro 130 (dhakhaatiirta cudurrada raajada, dhakhtarka maskaxda, dhakhaatiirta cilminafsiga, cilmi-nafsiyaadka, cilmi-nafsiga, MD-yada) oo qiray oo si guul leh uula dhaqmay ED-da laydhka ah iyo porno-sababtoo ah khasaarinta galmada.